कुलमानलाई प्रश्न- तपाईं हटेलगत्तै किन काटिन थाल्यो बिजुली? (भिडिओ) :: Setopati
मनोज सत्याल काठमाडौं, माघ ७
पछिल्लो समय फेरि बिजुलीको लाइन जान थालेको छ। बत्ती जाने बित्तिकै कति फेरि लोडसेडिङ त हुन लागेको हैन भन्ने संशय सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ। घिसिङ अहिले बिजुली जानुमा दुई समस्या रहेको बताउँछन्। पहिलो व्यवस्थापनको कमजोरी र दोश्रो प्राविधिक कारण। उनी बत्ती जाने बित्तिकै तत्कालै काम गर्ने प्रवृति हटेको र विद्युत प्राधिकरणमा 'चेन अफ कमाण्ड'को समस्या रहेको बताए। त्यस्तै पावरहाउस बन्द भए लोडसेडिङ गर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए। त्यसका लागि पनि विद्युतको आपूर्ती तर्फ व्यवस्थापन गर्ने कौशल आवश्यक रहेको बताए।
उनले काठमाडौं उपत्यकामा विगतको भन्दा धेरै मागमा वृद्धि नभएको बताए। यदि लाइनमा ओभरलोड भए ट्रान्सफर्मर परिवर्तन लगायतको काम तत्काल गर्नुपर्ने कुलमानको तर्क छ। आफू प्राधिकरणमा भएको भए 'सहि मान्छे ठाउँमा राखेर' काम गराउन सक्ने बताए। 'अहिले विद्युतको माग वृद्धि नभएको अवस्थामा यसरी झ्याप झ्याप बत्ती जानु हुदैँन थियो', कुलमानले भने, 'कतै त कतै कमजोरी व्यवस्थापनमै छ।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ७, २०७७, ००:५३:००
१ सय ४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दामा कहिले आउँछ फैसला? (भिडिओ)
कोरोनामुक्त भए मिर्गौला प्रत्यारोण र ट्युमरसहित चार शल्यक्रिया गरेका हरिनारायण (भिडिओ ब्लग)
संक्रमितको उपचारमा सहयोग गर्न नसक्दा मनमा ग्लानी महसुस हुन्छ- भिडिओ रिपोर्ट